Juan Tadeo: Miatrika ny fahaketrahana taorian’ny fihaonambe · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Septambra 2019 3:42 GMT
(Lahatsoratra tamin'ny volana Janoary 2015)
“Ahoana no ahafahantsika lazaina hoe miverina amin'ny fiainana mahazatra teo amin'ny toerana nisy antsika” Izany no fanontaniana reko angamba in-dimy na in'enina nandritra ny Fihaonambe Global Voices Citizen Media, fanontaniana nifanaovan'ireo nanatrika izany.
Gaga aho, tena zendana tanteraka amin'ny tanjaky ny fikambanantsika sy ny halehiben'ny finamanantsika, raha vao nihaona tamin'ny olona tahaka antsika, fo manolo-tena manana tanjona iombonana, fitiavana mitovy amin'ny filazana tantara iray sy miady ho amin'ny zavatra tsara tahaka ny fahalalaham-pitenenana sy ny fahalalahana hahazo vaovao.
Ho ahy, ny lesona lehibe indrindra dia mila miasa mifanakaiky kokoa amin'ny namana mpikambana GV isika, indrindra ireo ao amin'ny atidoha, izay nampiseho antsika fa mihoatra noho ny matihanina izy ireo, ary nanana zavatra betsaka nianarana tamin'izy ireo isika. Ny fahalalana no tombontsoa lehibe indrindra azontsika manokana, avy amin'ny firotsahantsika an-tsehatra ao amin'ity fiarahamonina tsimanampaharoa ity.
Nahare ireo tantara mampihetsi-po momba ireo “zoro” samihafa manerantany isika, sy ireo fomba fijery tena manokana avy amin'ny namanantsika izay tsy mbola nihaona tamintsika kanefa nanokatra ny fanahin'izy ireo tamin'ny ekipa rehetra…. Tsy afaka milaza betsaka momba izany aho satria nilaza zavatra mahagaga saingy manokana (tsiambaratelo) ny sasany tamin'izy ireo, minoa ahy, nanampy ny fifamatorantsika sy ny fanoloran-tenantsika hatanjaka kokoa ho an'ny tetikasa ny fanamarihana rehetra.
Ny fotoana tena tiako indrindra na izany aza dia ny andro voalohany tamin'ny fivoriana ho an'ny daholobe, rehefa namaky fanambarana ny sasany tamin'ireo mpiara-miasa ao amintsika, fanambarana mitaky ny famotsorana avy hatrany ireo bilaogera nogadraina manerana izao tontolo izao. Enga anie hipaka any amin'ireo izay nanagadra tsy ara-drariny ireo nampiasa ny fahalalaham-pitenena ny fanambarantsika.
Noho izany, “ahoana no hiverenantsika” amin'izao isika nandao ny mpiara-miasa amintsika izao? Tsy azoko antoka tsara fa ho ahy, tsy maintsy miatrika an'ity fahaketrahana taorian'ny fihaonana ity amin'ny fomba matihanina isika, amin'ny fampiasana ireo lesona nianarantsika nandritra ny fihaonambe mba hiasa hatrany hitondra zavatra hafa. Tsinontsinona isika raha tsy matihanina ary tokony hanaporofo izany hatrany amin'ny mpamaky antsika rehetra sy ireo rehetra izay tokony hamafisina ny feony.
Ho an'ireo namana GV izay mety mamaky ireo teny ireo, avelao aho hilaza hoe: tombony manokana (no azontsika), mahafinaritra ianareo, ianareo tsirairay avy ary tsy andriko ny hiara-hiasa akaiky aminareo mba hahatonga ny tontolon'ny bilaogy sy ny aterineto ho toerana tsara kokoa. Antenaina fa hifankahita tsy ho ela isika.
Te-hisaotra manokana an'i Krzysztof aho tamin'ny asa nataonay tamin'ny alina farany tany Filipina (na dia mbola tsy afaka namoaka izany aza izahay!).
Lena, ry Sayuri malala, Marianna, Marisa, mahafinaritra ianareo ary manina anareo sahady aho!
Ellery: iray amin'ireo fananana lehibe indrindra an'ny GV ianao ary variana tamin'ny talentanao sy ny fahaizanao aho. Tohizo ny asa tsara!